Aljabra waa qeyb ka mid ah xisaabta kuna saabsan adeegsiga summadaha dahsoon iyadoo inta badan la isticmaalo xuruuf. Sida caadiga ah waxaa Aljabrada mararka qaarkood loo yaqaan ”wax ku xisaabinta xuruufta”. Erayga Aljabra waa eray asalkiisu yahay af-Carabi, al-jabr, taas oo macnaheedu yahay ”isku xir”. Aljabrada asal ahaan waxaa bilow u ah buugga cinwaankiiisu yahay iskuxirka xisaabinta iyadoo la adeegsanayo al-jabr iyo al-muqabala oo uu qoray saynisyahankii Beershiyaanka ahaa ee Maxamed al-Khawaarismi, laguna daabacay Baqdaad qiyaastii 1200 sano ka hor.
Yurub waxay ka baratay aljabrada carabta. Summadaha luqad ahaan loo adeegsado aljebrada kuwaas oo si sahlan loo fahmi karo waxay asaasmeen qarnigii 15 aad iyo 16 aad. Xisaabyahannada Yurub waxay kaloo ka qaateen aljabrada Diofantos oo u dhashay Giriigga kaas oo noolaa 1800 sano ka hor. Diofans iyo al-Khawaarismi waxaa loo yaqaan ”aabayaasha Aljabrada”.
Adigoo adeegsanaya aljabrada ayaad xallin doontaa mas’alooyin ka adag kuwii hore. Xisaabtu waxay noqoneysaa mid dahsoon maaddaama ay xarfo u taagan yihiin tirooyinka, saas oo ay tahay waxay noqonaysaa aalad xoog badan. Aljabradu waxay asaas xooggan u tahay sii wadashada barashada xisaabta.